दश वर्षपछि सचिनको पुनर्आगमन – Naulo News| Nepali News Portal
Home/समाचार/दश वर्षपछि सचिनको पुनर्आगमन
दश वर्षपछि सचिनको पुनर्आगमन
काठमाडौं – लामो समयसम्म मिडियमा नदेखिएका गायक सचिन रौनियारको पुनर्आगमनसँगै नेपाली संगीत क्षेत्रमा छुट्टै आशा थपिएको छ । काठमाडौंमा जन्मिएर बाल्यकाल पनि काठमाडौंकै मखन टोलमा बिताएका रौनियारले नयाँ उत्साहका साथ संगीतलाई पुन: अंगालेका छन् ।
सर्पवाला गायकको उपाधि पश्चात चर्चाको शिखरमा पुगेका उनी हिजो आज निकै व्यस्त देखिन्छन् । रौनियार भन्छन्, म काम गर्छु फलको आशा गर्दिनँ । जो कोहीको समय आउँछ, कसलाई समयले कति बेला साथ दिन्छ केही भन्न सकिँदैन । बस आफूले कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन, बिना साधना कोही पनि सफल बन्न सक्दैन यदि बनिहाल्यो भने पनि त्यो टिकाउ हुँदैन ।
यस्तै रमाइला कुराकानीका साथ नौलो न्युजका सम्वाददाता प्रेक्षा लम्सालसँग गरिएको अन्तरवार्ताको संवादित अंश:
बाल्यका कस्तो रह्यो ?
बाल्यकाल नर्मल नै रह्यो । मेरो परिवारबाट कोही पनि हुनुहुदैनथ्यो । पहिला पहिला रेडियो नेपालबाट गीतहरु सुन्ने गर्दथेँ । त्यसपछि नेपाल टेलिभिजन, पत्रपत्रिका आए । यसरी नै सुरुुवात भयो । अग्रज फत्तेमान, कोइली दवी, नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश, सुनिल उप्रेती लगायतका अन्य सिङगरहरुका गीतहरु सन्थेँ र गाउने कोसिस गर्थेँ । यसरी गर्दै जाँदा कुन बेला यो स्थानमा आइपुगेँ थाह नै भएन ।
कहिले देखि गाउन सरु गर्न भयो ?
मेरो पहिलो गीत २०४६ सालमा आएको हो । रुची पहिलेदेखि नै भएकाले सुरु चाँही सात क्लासदेखि नै गरेको हो ।
संगीतका लागि औपचारिक कक्षा कतै लिनु भएको छ ?
पहिलो गीत रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाँही जस्ट रेडियो सुनेरै ट्राई गर्थेँ । त्यसपछि पहिलो गीत कति विवश हुँदो रहेछ एकान्तमा मान्छे निस्किसकेपछि चाँही लखनौमा गुरु श्रीनिमास भट्टाचार्य ज्यूबाट सिक्ने मौका पाएको थिएँ । त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि रेडियोमा भोकल टेस्टको नियम थियो जसलाई मापदण्डका रुपमा लिइन्थ्यो । त्यसमा पास भएपछि अरु गीतहरु गरेको हुँ ।
अहिलेसम्म कतिवटा गीतहरु गर्नुभएको छ ?
खोई गीत त मेरो यति नै भनेर याद छैन, सय त नाघ्यो होलाकी झैँ लाग्छ ।
यसरी बीचमा हराउनुको कारण के बुझ्न सक्छौँ त हामीले ?
मलाई धेरैले यो प्रश्न गर्नुहन्छ । सच्चा संगीत साधक बरु परिस्थितिका कारण संगीतबाट टाढा जान सक्ला तर संगीतले उसलाई कहिले छोड्दैन । त्यतिखेर खासगरी एकनासको समय थियो । एनालगबाट अहिले डिजिटलमा आएको छ । प्रविधिमा धरै सुधार आयो । मिडियाले फड्को मारिसक्यो । ग्यापिङको कुरा गर्दा म हराएको थिइन अध्ययन गर्दै थिएँ । मैले संगीत च्वाट्टै छोडेको भने थिएनँ । म्यूजिकहरु गर्ने, साथीहरुसँग ज्यामिङहरु भइ नै रहेको थियो । गीत पनि मैले रेकर्ड गरि नै रहेको थिएँ । बाहिर मात्र नदेखिएको हुँ भित्र चाँही संगीतसँगै रमाइरहेको थिएँ ।
तपाईको टर्निङ पोइन्ट कुन हो ?
यो वनमा छैन क्यारे न्याउली कराउँदैन ए कान्छी, छ भनु कि छैन भनु, कहाँ छौ कहाँ जस्ता थुप्रै गीतहरुले मलाई चिनाएका छन् । त्यति भन्दा पनि चिन्नु भएन भने मलाई सर्पवाला गायक भनेर पनि चिन्दछन् । यो सर्पवाला भन्ने शब्दले मेरो छुट्टै पहिचान बनाउन सहयोग गर्यो ।
अबका दिन कसरी बिताउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
यो प्रश्नमा हाँसो उठ्ने उत्तर दिन मन लाग्यो । पहिले चाँही माल गाडी थिएँ, यो ग्यापिङमा अहिले एक्सप्रेस गाडी भएको छु । लामो हाँसो….. अब चाही छोड्ने वाला छैन् । म कन्टिन्यु यही सेक्टरमा लागि पर्नेछु । नेपाली संगीतमा केहि अविष्मरणीय कोसेलीद्वारा इट्टा थप्ने काम गर्नेछु । दर्शक स्रोताको माया र अग्रजहरुको वचनलाई मध्यनजर गर्दै केही प्रोजेक्टहरु छन् । त्यसलाई सफल पार्नेछु र मिडियाको अगाडि, यहाँहरुको अगाडि म ल्याउने छु ।
संगीतमा भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
स्ट्रगल जुनसुकै क्षेत्रमा छ । अटुट र अथक साधनामा विश्वास गर्नेलाई एकदिन न एकदिन पक्कै सफलता मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई । एउटा भनाइ छ नि वान्स सिङ्गर इज अल्वेज अ सिङ्गर भनेपछि सच्चा कलाकारका मर्ने बेलासम्म पनि सुर लागि रहेको हुन्छ भन्छन् । यसरी अथक प्रयास गर्नेहरुको संगीतमा भविष्य राम्रो देख्छु म । आफूसँग भएको कुरालाई परिस्कृत गर्दै विकास गर्दै लानु पर्यो ।
नेपाली संगीत क्षेत्रप्रति कुनै गुनासो छ ?
दुई चार वटा कुराहरु छन् । अटुट र निरन्तर साधना गर्ने साधक बाहेक रातारात हिट हुनु भएको कलाकारहरुको क्षमता जाँच नगरी सम्मान गरिने, अनि जो चाँही बाल्यकालदेखि नै रातदिन नभनी आफूलाई साधनामा तल्लीन राख्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिने इज्जत नदिदा साच्चिकै मन रुन्छ । अनि अर्को कुरा स्रोता दर्शकहरुले पनि स्वर शब्द र संगीत सबै उत्कृष्ट गीतहरु मात्र छानेर सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु । यही नै हो, कलाको सम्मान सही ढङ्गले होस्, सच्चा प्रतिभा चिनेर अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाइयोस् ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुनछ ?
हजुरहरुको माया, सपोर्ट सदैव मेरा लागि अत्यावश्यक कुरा हो । धेरै समयसम्म देखिएन भनेर पछाडि नपारिदिनुहोला । अबका दिनहरुमा पनि पहिले झैँ माया र सपोर्ट गरीदिनु होला तपाईहरु बिना यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो छ । सबैलाई जसरी माया र सपोर्ट दिनु भएको थियो अब पनि त्यसरी नै साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु ।
गायक सचिन रौनियार
बम्जनको आश्रममा यौन शोषण, तीन जना आनी पाँच वर्षदेखि बेपत्ता
चैतमा लगानी सम्मेलन